Kodzero-dzevanhu, 30 Nyamavhuvhu 2019
Chishanu 30 Nyamavhuvhu 2019
Nhengo yeZCTU Yopinda muBhodhi reNSSA
Gurukota rezvevashandi, Doctor Sekai Nzenza, vanoti vakadoma nhengo yeZCTU inogara mubhodhi reNSSA
Mapurisa Anotadzisa MDC Kuratidzira kuMashonaland West
Sachigaro weMDC mudunhu reMashonaland West, VaRalph Magunje, vabvuma kuti varambidzwa kuratidzira munzvimbo dzinoti Chinhoyi, Mhangura, Kariba, Karoi, Chegutu neKadoma.
Sangano rakazvimiririra richibatsira mune zvesarudzo, reZimbabwe Election Support Network, rinoti kumanyamanya kuri kuitwa nebazi reDistrict Development Fund richichera zvibhorani zvizhinji muGlen View South kunoratidza sekutenga mavhoti evanhu sezvo kuchaitwa sarudzo munharaunda iyi.
Dare Rinoti VaKambarami Havakodzeri Kuva Kanzura
Mutongi wedare repamusoro muBulawayo ati mutevedzeri wameya weguta reBulawayo, VaTinashe Kambarami, havakodzeri kuve kanzura sezvo vakapinda pachinzvimbo ichi mushure mekunge vabatwa nemhosva yekuba.
VaMafume naVaPorusingazi Votatsura neNyaya yeKuratidzira
Vamwe vemapato anopikisa, vemasangano akazvimirira, venyika dzekunze pamwe nemamwe mapazi eUnited Nations vari kubatana mushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekurambidza kwairi kuita vanopikisa nevashandi kuratidzira chinova chinhu chinobvumidzwa nebumbiro remitemo yenyika.
Mauto Anoiswa Mumatunhu Ari Kuronga Kuratidzirwa neMDC
Mauto eZimbabwe National Army anonzi akaungana muChinhoyi pakamba yemapurisa yeChinhoyi Central Police Station, uye pajeri reMurehwa Prisons, paine fungidziro yekuti igadziriro yekuparadza kuratidzira kunonzi kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC mumatunhu eMashonaland East neMashonaland West.
Dunhu reGauteng Roronga Kudzika Mitemo Inosarura Vabvakure
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti mashoko akadai haafanirwe kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana saVaMakhura.
Ishe Ndiweni Vanobvisiswa Madhora Mazana Mashanu seChibatiso
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare, Justice Thompson Mabhikwa, vange vabvuma chikumbiro cha Ishe Ndiweni chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mabhanga Anoti CBZ, FCB neStandard Chartered Omisa Basa Vashandi Vakawanda
Vashandi vemumabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino.
Mhirizhonga Mukati meGuta rePretoria Yokanganisa Zvizvarwa zveKunze
Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga neChipiri pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha iyi.